အသက်အရွယ် ကြီးရင့်သူ များစွာသည် ဆွေမျိုးသားချင်းများ၏ နှိပ်စက်မှုကို ခံနေကြရဟု ကုလသမဂ္ဂ ဆို - Yangon Media Group
အသက်အရွယ် ကြီးရင့်သူ များစွာသည် ဆွေမျိုးသားချင်းများ၏ နှိပ်စက်မှုကို ခံနေကြရဟု ကုလသမဂ္ဂ ဆို
ဂျီနီဗာ၊ ဇွန် ၁၅
များစွာသော အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူများက ၎င်းတို့မှာ ဆွေမျိုးသားချင်းများ၏ နှိပ်စက်မှုဒဏ်ကို ခံနေကြရကြောင်း၊ တချို့ကထိုသို့ခံနေကြရသည်ဟု ယုံကြည်နေကြကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂ၏ ဇွန် ၁၄ ရက်ထုတ်ပြန်သည့် အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြခဲ့ကြောင်း ဆင်ဟွာသတင်းက ဇွန် ၁၅ ရက်က ဖော်ပြလိုက်သည်။
ကမ္ဘာ့သက်ကြီးရွယ်အိုများ နှိပ်စက်ခံရမှု အသိအမှတ်ပြုနေ့ ဖြစ်သည့် ဇွန် ၁၅ ရက်တွင် အဆိုပါကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြရာတွင် လူတိုင်းသည် သက်ကြီးရွယ်အိုများအား နှိပ်စက်မှုကို သတိကြီးစွာထားပြီး သံသယရှိသူများအား သတင်းပို့ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ အသက်ကြီးသူ လူကြီးများ၏ ငွေ ကြေးများကို အလွဲသုံးစားမှုများလည်း ပါဝင်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများ ပျော်ရွှင်မှုဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး လွတ်လပ် သော ကျွမ်းကျင်သူ ရိုဆာကော်ဖီး မက်တေက ဤအစီရင်ခံစာပါ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမှုတချို့ သိသိသာ သာ မမြင်တွေ့ရကြောင်း၊ ဤဖြစ်ရပ်မှာ ထူးဆန်းစွာ ကြီးထွားလာနေ ကြောင်း၊ ဘဏ္ဍာရေး အနိုင်ကျင့်မှုကိုလည်း မြင်ရန် ခက်ခဲကြောင်း သူမက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဤပြဿနာမှာ မည်မျှကြီးထွားနေသည်ကိုလည်း ပြောရခက် ကြောင်း သိရမှုနည်း၍ အချက်အလက်လည်း ရှားပါးသည်ဟု သူမကဆိုသည်။ ကုလသမဂ္ဂ အစီရင်ခံစာအရ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သူ အများစုမှာ ဆွေမျိုးရင်းချာများ ဖြစ်ကြကြောင်း၊ ဤသည်မှာ သီးခြားဖြစ်စဉ်တစ်ရပ် ပင်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ဘဏ္ဍာရေး အလွဲသုံးစားပြုသည်ကို အသက်ကြီးသူများက သိရှိကြောင်း သို့ရာတွင် အဆိုပါငွေ ကြေးများအား ¤င်းတို့အပေါ် ပြုစု ခ၊ ဂရုစိုက်ခ ပေးငွေအဖြစ် မှတ်ယူလိုက်ကြသည်ဟု ပြောခဲ့ကြသည်။ ဤကိစ္စမျိုး တွေ့ရှိပါက အ ကြောင်းကြားသင့်ကြောင်း သူမက အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ပုဂ္ဂလ ဓိဋ္ဌာန်အားဖြင့် ပုတ်ခတ်ပြောဆိုခြင်း ရှောင်ကြဉ်ရန် ဒီချုပ်အမတ်ကို ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥက?
နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား လိုအပ်ချက် မြင့်တက်လာမှုကြောင့် ဂျပန်၏ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး စည်းမျဥ
ခွင့်မပြု ဓာတုဆိုးဆေး ကင်းစင် အရောင်းဆိုင်များကို အသိအမှတ်ပြု ကတ်ပြားများ ထုတ်ပေးသွားမည်
သပြေရိပ် စားဖွယ်စုံ ဆိုင်အပါအဝင် စားသောက်ဆိုင် သုံးဆိုင် အခွန်တံဆိပ် ကပ်ထားသည့် ပြေစာမျာ?
စားသုံးသူ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုကို တိုင်ကြားလာပါက ကျောသားရင်သား မခွဲခြားဘဲ ဆောင်ရွက်မည်
ဆော်ဒီအာရေဗီးယားနိုင်ငံ မက္ကာမြို့ ဟာ့ဂ်ျ ဘုရားဖူးကာလ လူအုပ်ပြို၊ အချင်းချင်းနင်းမိ၍ အီဂျစ